IWeeliday Yurt kwiGalari yeCaolas, - I-Airbnb
IWeeliday Yurt kwiGalari yeCaolas,
Isle of Harris, Scotland, United Kingdom
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguStefan
IWeeliday Yurt kwiGalari yeCaolas yindawo ekhethekileyo emangalisayo, indlu eluhlaza, indlu yokuqala eyenziwe ngamaplanga kunye neefestile zemifanekiso ebonisa ulwandle ngaphaya kweIsle ofpay neSouth East Harris.
Izinto ezifumanekayo ziquka ifestile yophahla olungqukuva, igumbi leshawa elahlukileyo, ikhitshi, izitulo ezitofotofo nesitovu seenkuni, kunye nebhedi elala abantu ababini.
Le ndlu yonwabela indawo esemazantsi enokukhanya kwemvelo okuninzi. Igcwele kakuhle, ifudumele kwaye itofotofo
Le ndlu ikwiimayile nje eziyi-5 ukusuka kwilali nakwizibuko lezikhephe zaseTarbert kunye neevenkile, iivenkile zokutyela, utyando lukaDkt njalo njalo. Kukho iindlela ezininzi ezintle zokuhamba kule ndawo kunye ne-Isle ofpay kunye ne-bistro yokutya kwaselwandle eyaziwayo yasekuhlaleni, kwaye uhambe ngenqaba enesibane phezulu ngaphaya nje kwebhulorho. Le ndlu ilungele ukuhlala ixesha elide xa ubuka yonke iHarris okanye usuku okanye iintsuku ezimbini ezikhethekileyo ngaphambi kokukhwela isikhephe.
Intente isecaleni kweGalari yam kunye negumbi leTi, elivulekileyo phakathi evekini ukususela ngo-10.30am - 17.30
4.90 out of 5 stars from 288 reviews
4.90 · Izimvo eziyi-288
IWeeliday Yurt isembindini welali encinci (i-crofting township ukuba ichane) yaseCaolas Imperpaigh ngaselunxwemeni ejonge ngaphaya kolwandle ukuya eIsle ofpayay kunye naseMpuma Yonxweme lwaseHarris ukuya entabeni iRhoineabhal. Siseziimayile nje eziyi-5 ukusuka kwizibuko lezikhephe kunye nelali yaseTarbert kunye neevenkile, iivenkile zokutyela, ukuhamba kunye neendawo zokuthengisa. I-Isle of Imperpay iphezu nje kwebhulorho kunye neBistro yokutya kwaselwandle eyaziwayo ekuhlaleni, kunye nokuhambahamba okumnandi ukuya kwinqaba enesibane phezulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Stefan
Ndihlala ngakwindlu yentsimbi eyenziwe ngamatye, iGalari yam kunye negumbi leTi libekwe kwintente yamaplanga esecaleni komnyango eyaziwa ngokuba nguBen Yurt. Ndidla ngokuhlala kule ndawo ukuba ufuna uncedo kodwa ndikuvuyela kakhulu ukukunika izinto eziyimfihlo ngexesha lokuhlala kwakho.
Ndihlala ngakwindlu yentsimbi eyenziwe ngamatye, iGalari yam kunye negumbi leTi libekwe kwintente yamaplanga esecaleni komnyango eyaziwa ngokuba nguBen Yurt. Ndidla ngokuhlala kule…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Isle of Harris